Sina 5445 Mpanentana avo lenta haingana mpaninjara rano mafana ho an'ny tokantrano sy toeram-piasana orinasa mpamokatra | Filter Tech
5445 Dispenser rano mafana haingana ho an'ny tokantrano sy toeram-piasana
Makà rano mangotraka madio sy voasivana mahitsy amin'ny kapoakanao ao anaty indray mipy maso.
Mangotraka haingana ao anatin'ny 3 segondra, tsy miandry intsony.
Ny mari-pana amin'ny rano sy ny habetsaky ny rano azo ampiasaina isan'andro.
Tavo-drano lehibe fanampiny, tsy mila famenoana rano matetika.
Outlet TDS display, zahao mora foana ny kalitaon'ny rano voasivana.
Manasongadina tondro mety aminao mba hamelana anao hanolo ny sivana.
Fanapoahana tena manokana mba hahazoana antoka ny famatsian-drano tsy tapaka avy amin'ny fitaovana.
Tonga amin'ny famolavolana matevina sy kanto, tsy mila fametrahana manokana.
Ny safidinao voalohany amin'ny fisotroana ankohonana
Fanafana haingana ao anatin'ny 3 segondra
Ny mangotraka haingana dia mamela anao hanao kafe kaopy ao anatin'ny 3 segondra
Dingana marobe, fampisehoana filtration tsara kokoa
Ny fitaovana dia tsy mitaky fametrahana akory fa plug fotsiny ary manomboka ampiasao
Fangotrahana haingana, fitsitsiana angovo
Manome rano mafana mahitsy amin'ny kapoakanao ity dispensera rano mafana eo noho eo ity, ka tsy hisy intsony ny fiandrasana ketra hahandro. Ny mangotraka haingana dia mamela anao hanao kafe kaopy ao anatin'ny 3 segondra. Rehefa mahandro ny habetsaky ny rano ilainao izy, raha ampitahaina amin'ny kettle nentim-paharazana izay mahandro rano hatrany, ity dispenser rano mafana eo noho eo ity dia tena mamonjy angovo betsaka, izay mahomby angovo, mety ho an'ny tokantrano sy ny toeram-piasana izay mila mampihena ny fivoahan'ny angovo.
Ity dispenser rano mafana eo noho eo ity dia mandray ny haitao mandroso sivana mitambatra izay mampiditra mediana sivana isan-karazany ho an'ny fahombiazana mahomby kokoa. Ny sivana CF dia manana antsanga PP mitsonika sy tsentsina gazy mihetsika hanala ireo sombintsombiny lehibe sy klôro avy amin'ny rano. Ny dingana MRO dia misy membrane osmosis miverimberina, sakana karbonika iray ahetsiketsika ary fofona PP notsofina mba hampihena ny loto hafa toy ny TDS sy ny metaly mavesatra.
Ampidiro ary hilalaova, Friendly mobility
Ny fitaovana dia tsy mitaky fametrahana akory fa plug fotsiny ary manomboka ampiasao. Noho izany dia afaka mipetrapetraka tsotra izao na aiza na aiza amin'ny latabatra izay lavitra ny loharanon'ny rano, toy ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fisakafoana, efitrano fialamboly, sns.. hanova ny toerana.
Tankina lehibe, famenoana kely kokoa
Ny dispenser rano mafana eo noho eo dia miaraka amin'ny fitoeran-drano lehibe azo esorina hatramin'ny fahafaha 1,5L, lehibe ampy hahazoana rano 3L tsy tapaka (mamokatra rano rehefa mahazo rano), ka tsy ilaina ny mameno azy io matetika. Mila mamoaka ny fitoeran-drano fotsiny ianao ary mameno azy amin'ny rano isaky ny lany ny rano. Ankoatr'izay, ny fitoeran-drano dia namboarina tamin'ny mazava mba hahitanao amin'ny alàlan'ny trano plastika ahafahanao milaza avy hatrany ny haavon'ny rano sy rehefa mila refill.
lafiny 435 × 178 × 395mm
Ny mari-pana amin'ny rano miditra 5-38 ℃
Herin'aratra 220V / 50HZ
Fanamboarana sivana CF (PP + CB) + MRO (RO + CB + PP)
Taham-pivoahana 0.2L / min (75G)
Taham-pikorianan'ny rano mafana (95 ° C) 0.4-0.5L / min
Fomba fanamainana Fanafanana sarimihetsika matevina
Teo aloha: Sediment amin'ny trano manontolo PP Meltblown Sivana
Manaraka: 5290 Backwash Fahombiazana avo lenta ao amin'ny rafi-pitantanana rano azo ampiasaina indray
Dispenser rano voasivana
Sivan-drano sy mpizara
Fanadiovan-drano sy famoahana rano
5673 Countertop Ultrafiltration fitsaboana rano ...
5677 Countertop Ultrafiltration fitsaboana rano ...
5131 Kitapo sivana rano 10-kapoaka
Fantaro hatrany ny sivana momba ny rano ao amin'ny 129t ...
Jereo hoe inona no mitranga any Thailand
Cartridge fanoloana rano, Fitaovana fitsaboana rano, Sivanin'ny rano ao an-trano, Fanadiovan-drano ho an'ny trano iray manontolo, Rafitra fanivanana rano Osmosis tsara indrindra, Rafitra Osmosis miverimberina amin'ny trano feno,